Goobanaan Maal Jedha? – Beekan Guluma Erena
Goobanaan Maal Jedha?	Beekan Erena
Poems March 22, 2016March 22, 2016	15 Comments
223SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
G O O B A N A A N M A AL J E DH A ? Utuudu’aaka’eegaafatamata’ee
MeemaalumajedhaGoobanaan as ba’ee
U-u-u nanballeesse nan miidhe lammiikoo
Ofitti galagaleeni nyaadheera dhagnakoo
Balleessaankoo hedduu kan seenaan galmeesse
Kanan du’aaf kenne halagaaf dabarsee
Kaniin gowwoomfamee nafxanyaaf kurkuruu
Dilbii dhuma hinoolleetti sabakoo gurguruu
Seenaan ani dabse godaannisa ta’ee
Xinnaa guddaan beekee addunyaa walgahee
Waanan balleessetu kumaaf kumaatamaa
Akkakoo akka hintaaneef walitti naaf himaa
Jedha ta’a laataa? Goobanni wawwaatee
Beenyaa lubbuu badeef morma isaa laatee!?
Garuu komee guddaa qabaami Goobanni
Warreen har’aa taajjabee kan isa caalani
Jiruum kumaatamaam lakkoofsi itti hinba’u
Kan beektota cabsee barattoota ari’uu
Juuneddin Saadoofaa kan dhaloota Cabsee
Qaroo dhibba sadii karaatti hambisee
Yunivarsiitii keessaa oofee ariisisee
Lammii gaddisiisee diina garaa ciibsee
Mooraatti naqanii kan baqatan irraa
Rasaasaan waadanii ficcisiisan ciraa
Warreen seenaan haqaa galmeerra kaawwate
Nyaata afaan kaa’a tokkoof lammii galaafate
Warreen akka kanaan Goobanaan maal jedha?
Utuu dorgomsiisee isa hinwayyu ta’aa?
Maaliif hammeeffama Goobanni inni durii
Inni isaa asii maaf hincaalu tarii
Kan har’a baratee digiriinsaa tuullaa
Yoo lammiin beela’ee ofii nyaatee bulaa
Kan akkasii kunuu Goobanaa hincaaluuree?
Maaliif guyyaa hundaa anumaan jibburee?
Jedhee hindubbatatuu? Goobanaan wawwaatee
Qomeesaa tarsaasee qabattoo hiikkatee
Kan lammiif hindhiigne mul’anni gabaabaa
Boqonnaa hinargatu bara hundaa gaabbaa
Hayyuun biyyasaatiif xiiqa’ee hinhojjenne
Gurra lammii nyaata, wayya isa hindhalanne
Faayidaa dabartuuf maaf saba dararsaa?
Jiruun dabareedhawoo maaf kuusaa abaarsaa?
Utuu yeroo arganne wal i’iyyaafanne
Kan jirus madaallee kan du’es barbaanne
Nama seenaa hinbeekne kan jiraatu faallaa
Kan nafxanyaan joorsu joonja’aa wallaalaa
Goobanaan maal jedha? abbaan seenaa jallaa…
© Beekan Guluma Erena, 2016
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa223SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Kitaabota Afaan Oromoo →
15 thoughts on “Goobanaan Maal Jedha?”	FufaApril 4, 2016 at 2:11 pmPermalink	Galatoomi beekan kanaa achi maamila keeti. Garuu wayyaaneen hammam marsaariitii Oromoo bareedaa kana akka online irra tursiistu hin beeku hundumaafuu galata qabda. Jabaannee wal qabannaan hundayyuu ni goona.
Reply	LalisaaApril 7, 2016 at 4:35 pmPermalink	Galata kee BILISUMMAA haa ta’u
Reply	Ĝaddisa yusef carcarApril 10, 2016 at 12:30 amPermalink	Galatni kee bilisummaa haatahu
Baruumsaa baay’ee sirraa barachaa jira
Reply	Gamtaa ZawudeeApril 10, 2016 at 5:53 amPermalink	Gocha albaadhessaa Goobanni galmeesse
Madaa hin qoorre ta’e galmeen seenaa kuuse
Wayyoo GOOBAANOOTAA warri jarraa kanaa
Keessan kana hin caaluu? Of laalaa jaranaa …………………^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Har’aaf garaan yaaddee maaf dalagda shiira?
Seenaan hin maseenu Martuu galmeef jira
Koottaa garaa dhiifnee sammuudhan haayaannuu
Boruuf kun salphinaa, safuu!! Tiruu dhiigaa hin nyaannuu…
Beekan Galatoomi jajjabaadhu. Ammas si eegna.
Reply	abdulbasitApril 10, 2016 at 10:19 amPermalink	Kan goobana harka meeqan qaroo oromoo meeqa karati hambise meeqatu jira
Reply	MURTIIKOOTApril 10, 2016 at 10:56 amPermalink	BEEKAN! ATI DHUGUMA AKKUMA MAQAAKEE BEEKAADHA! GALANNIKEE HAWWII ATI LAMMIIKEEF QABDU “BILIISUMMAA” HAA TA’U!
Reply	Guutuu DameeApril 10, 2016 at 1:01 pmPermalink	Beekan sanyii namaa
yaa hayyuu Oromoo
Kan haalan xiinxalu
seenaaf gocha qomoo
Lubbuukee haa dheeressuu
waaqni uumaa Oromoo !!!
Reply	MurtiguutoApril 10, 2016 at 2:03 pmPermalink	Obboleeysa keenya Beekan
Ammas beekaa tahi, addunyaanis kana caalaa si haa beektu.
Maal taha osoo dhalli keenya hundi akkas saba isaaf quuqamee (dhimmamee)?
An maal dubbadhee maal akkan dhiisu hin beeku.
Galanni kee dachaa haa tahu.
Reply	WaruApril 11, 2016 at 1:44 pmPermalink	barnoota hedduu sirraa argataa jirra nuuf jiraadhu BEEKAA
Reply	AnonymousApril 23, 2016 at 4:14 amPermalink	nuuf jiraadhu
Reply	bulo feyisaApril 23, 2016 at 1:36 pmPermalink	beekaa akkuma maqaa keetii long live
Reply	Qabsaa'aa Saba OromooApril 23, 2016 at 5:05 pmPermalink	Rabbi Ibsaa Gaara Gubbaa Si Haagodhu Sabboonaa Koo
Reply	Abdataa seenaaApril 26, 2016 at 7:42 amPermalink	Umrii dheeradhu hawwiin keeti fi keenyas galma haa gahu, tulluu tahi mulladhu
Reply	Bonsa Ilma oromtichaApril 28, 2016 at 7:32 amPermalink	Galatomii beeka akumaa maqaa keetii beekaadha saabnii ballaan kana bodaas abdii guuda siraa egaa jabaadhuu siin bonaa oromonii hundinuu hundii keenyaa bakuuma jiruuti wanta nuraa egamuu rawaachuu qaabnaa.
Reply	SabkeebarMay 15, 2016 at 2:15 pmPermalink	Galatnikoo siif lakku!